မြွေသူတော် မွေးကြမလား :D | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မြွေသူတော် မွေးကြမလား :D
မြွေသူတော် မွေးကြမလား :D
Posted by etone on Oct 31, 2011 in My Dear Diary | 28 comments
ရုံးပိတ်ရက်ရောက်ဖို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ …. စောင့်နေတဲ့ လူတွေကြားမှာ …. ကျွန်မလည်း ထိပ်ဆုံးက အပါဝင်ပေါ့ … ထိပ်ဆုံးကဆိုတာကတော့ … ဆန္ဓပြင်းပြတာကို ရည်ညွှန်းလိုက်တာပါ … ။ ရုံးပိတ်ရက်တိုင်း ဘာစိတ်ဖိစီးမှုမှ မရှိပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် အချိုးချခွင့်ရတာကြောင့်ပါပဲ … ။ ရုံးပိတ်ရက်တိုင်း တစ်နေကုန်တနေခမ်း ဘာမှ မစားမသောက်ပဲ အိပ်တတ်သလို ၊ တစ်ခါတစ်လေ … ရွာရိုးကိုးပေါက် လျှောက်သွားနေတတ်တာပါပဲ ….. ။
မနေ့က ရုံးပိတ်ရက်လည်းဖြစ် ရာသီဥတုကလည်း သာယာတာကြောင့် … တစ်နေကုန်အိပ်မယ့် စိတ်ကူကိုပြောင်းပြီး ….. ဟိုးနားဒီနားသွားခဲ့ပါတယ် ….. ။ ကျွန်မရဲ့ ဟိုနားဒီနားက စားဖို့သောက်ဖို့ ဆိုင်တစ်ခုခု … ဒါမှ မဟုတ်လျှင် …၀ယ်ခြမ်းစရာနေရာတစ်ခုခုကို ဆိုလိုခြင်းပါ … ။ မကျက်ခင်ကတည်းက မွှေးနေတဲ့ အမေ့ဟင်းတွေက ထမင်းစားချင်စိတ်ကို နှိုးဆော်နေတာကြောင့် … အိမ်ထဲမှာ ထိုင်ပြီး ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်မရှာချင်တော့တဲ့ စိတ်နဲ့ …. ပိုက်ဆံအိတ်လေးယူပြီး အောက်ဆင်းခဲ့တယ် … ။ လှေခါးလေးက ကျဉ်းတာကြောင့် …လူနှစ်ယောက်ဆုံလျှင် တယောက်က ခဏစောင့်ပြီးမှ သွားလို့ အဆင်ပြေပါတယ် … ။ အမေသဘောကျတဲ့ အဲ့ဒီအခန်းက ကုလား ဗလီရှေ့တည့်တည့်မှာရှိပြီး … အထက်အောက် ဘေးက အိမ်နီးချင်းတွေက ကုလားတွေမို့ … အတက်ဆင်းတိုင်း ဆုံရတဲ့အခါ … ညီစို့စို့ ချွေးနံ့ ကို အသက်အောင်ပြီး ကျော်လွှားရပါတယ် … ။ (အဲ … လူမျိုးခွဲခြားတာတော့ မဟုတ်ပါ … အနံ့ မတူတာ ၊ သူများထက် အနံ့ ပြင်းတတ်တာကို ရည်ရွယ်ပါတယ် ) ။
တိုက်ကြို တိုက်ကြား နေရောင် ဖျဖျကျနေတာကြောင့် … လက်ဖ၀ါးကိုခေါင်းပေါ်တင်နေကာရင်း …. အရိပ်ရတဲ့နေရာလေးတွေကနေ … လမ်းမကြီးဘက်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ် … ။ တဂွီဂွီ မြည်သံနဲ့ အတူ ဗိုက်ဆာကြောင်း အချက်ပေးသံဝင်လာတာကြောင့် …. စားနေကြဆိုင်ဖြစ်တဲ့ …. 39လမ်း နဲ့ မဟာ ဗန္ဓုလလမ်းထောင့်က ” ဖြိုး ” ဆိုတဲ့ ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာ ကြာဇံကြော် အေးအေးဆေးဆေးထိုင်စားဖြစ်တယ် …. ဗိုက်နည်းနည်းပြည့်သွားတော့ … ခြေနည်းနည်းရှည်ဦးမှဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ …. BAK က စိန်ဂေဟာ ပတ်ဖြစ်တယ် …. အိပ်ယာထဲ လှဲရင်းစားလို့ရမယ် မုန့် နဲ့ အချိုရည်ဗူး တွေဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာတော့ …. လမ်းမှာ မြွေရောင်းတဲ့ လူနဲ့ တိုးပါတော့တယ် …. ။
ကျွန်မလို စပ်စုတဲ့ ယောကျာ်း နှစ်ယောက် သုံးယောက်ကလည်း … ၀င်ကြည့်နေတာကြောင့် … သူတို့ ပခုံးပေါ်ကနေ ခြေဖျားထောက်ပြီး စပ်စုလိုက်တယ် … ။ ကျွန်မကလည်း ခြေဖျားထောက်ပြီး အကြည့် … စပ်စုစိန် ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုင်ထားတဲ့ မြွေကလည်း သူ့လက်ပေါ်ကတဆင့် သူ့ ပခုံးပေါ်က ကျော်တက်လာချိန် … ဗန္ဓုလသွေးပါတဲ့ ကျွန်မ ဟန်ချက်ပျက်ပြီး နောက်ပြန်ယိုင်သွားတော့တယ် … ကဗျာကယာ ဘေးကလူကို လှမ်းဆွဲပြီး ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ဆောရီးပြောရပါတော့တယ် …. ။ ဆောရီးပြောသော်လည်း သူ့မျက်လုံးတွေက ကျွန်မကို စပ်စလူးလို့ ဖွင့်မပြောရုံ အဓိပ္ပါယ်ပါပါ … အသံတိတ် လှည့်ကြည့်တယ်လေ … ။ အမှတ်မထင်ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ကြည့်ပြီး လွယ်လွယ်ကောက်ချက်ချတတ်တဲ့ ထိုယောကျာ်းကို မကျေမချမ်းမျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီး (သူကတော့မမြင်) …. .. ကိုင်ချင်လို့ ကိုင်တယ်များ မှတ်သလား ၊ ဖင်ထိုင်လျှက် ချော်လဲမှာစိုးလို့ ကိုင်တာဟု တီးတိုး ရန်ထောင်လိုက်မိတယ် … သူကတော့ မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မြွေရောင်းတဲ့ လူလက်ထဲက မြွေတစ်ကောင်ကို ယူကြည့်နေပါတယ် … ။
ကော်ဗူး ဖန်ပုလင်း အသီးသီးမှာ မြွေတကောင်စီထည့်ထားကာ …. စိတ်ဝင်တစား လာကြည့်သူများကို တကောင်ပြီး တစ်ကောင်ထုတ်ပြခဲ့တယ် ။ ယောကျာ်းတွေကတော့ ကိုင်ကြည့်တဲ့ လူရှိသလို လည်ပင်းပတ်ကြည့်တဲ့ လူလည်း ရှိတယ် …. ။ တစ်ချို့ကလည်း အသည်းယားတယ် မကိုင်ဘူး ဟု ဆိုကာသူများလက်ထဲက မြွေကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတော့တယ် … ။ အကြိမ်မြောက်များစွာ ကျွန်မ ထိုမြွေရောင်းသူကိုနဲ့ သူ့ မြွေတွေကို တွေ့ဖူးပါတယ် … လူတွေ အုံခဲနေတာက တစ်ကြောင်း ၊ စိတ်မ၀င်စား တာက တကြောင်း အဝေးမှသာ အရေးမလုပ်ပဲ ကျော်သွားခဲ့တာချည်းပင် … ။ ဒီတခါတော့ …လူကလည်းရှင်ပြီး … မြွေလေးတွေ အရောင်စုံတာကြောင့် စပ်စုတဲ့စိတ် အရင်းခံနဲ့ ၀င်ကြည့်မိပါတယ် … မြွေသူတော်လို့ ခေါ်ပါတယ်တဲ့ … မြွေလေးတွေ က နွားနို့နဲ့ ရေပဲသောက်ပြီး အဆိပ်မရှိပါဘူး … အဆိပ်မရှိဆိုသလို သူတို့ရဲ့ ခေါင်းလေးတွေက ကိုယ်လုံးထက်တောင် သေးငယ်နေပါသေးတယ် … အကောင်လေးတွေ တော့ ရှည်ပေမယ့် … မျှင်မျှင် ပိန်သေးသေးလေးတွေပါပဲ … ။ မြွေဆိုလျှင် လူတွေ အသံကြားတာနဲ့ ကြောက်ကြတဲ့ သတ္တ၀ါ … အခုတော့ သူတို့ခမျာ မြွေချင်းအတူတူ မြွေသူတော်အမျိုးစားဖြစ်တာကြောင့် … လူတွေ ဆော့စရာဖြစ်နေတော့တယ် … ။ အကောင်အသေးဆုံးရဲ့ ကိုယ်လုံးပတ်မှာ 1.5cm လောက်သာ ရှိပြီး အရှည် တစ်ပေကျော်ပါတယ် … ။ ရောင်းဈေးမှာ အသေးဆုံးလျှင် တစ်ကောင် သုံးထောင် ခန့် ရှိပြီး အကြီးဆုံးအကောင် 3.5cm လောက်လျှင် ငါးထောင်ကျပ်ခန့် ဈေးပေါက်ပါတယ် …. ။ ဗူးလေးထဲမှာ ထားလျှင် ထားသလို ခွေနေတတ်ပြီး အပြင်ထုတ် ကိုယ်မှာပတ်ထားလျှင်လည်း နေပါသတဲ့ … ။ တချို့ အိမ်တွေမှာ ၀ါးပင် အသေးလေးတွေနဲ့ အိမ်တွင်းမွေးမြူထားသလို အလှမွေး မှန်ပုံးနဲ့လည်း မွေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ … ။
ကျွန်မလည်း မြွေမချစ်တတ်ပါဘူး … ဒါပေမယ့် မြွေလေးတွေကို ကြည့်ရင်း ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနေရတာကို သနားသလိုလိုဖြစ်လာတယ် … ဒါပြင် သေးသေးလေးမို့ လူတွေ မကြောက်ကြတာ ကြည့်ရင်း အားမလိုအားမရဖြစ်လာပြီး …. တကောင်လောက် ၀ယ်မွေးမလား စိတ်ကူးမိသေးတယ် … ။ ဒဂုံစင်တာမှာ ဗုံးပေါက်ကတည်းက အခုနောက်ပိုင်းရှောပင်းစင်တာတွေဝင်လျှင် အိပ်ဖွင့်ပြီး စစ်တာ အမြင်ကတ်လွန်းလို့ … မြွေတကောင်လောက် အိပ်ထဲ ထည့်ထားမလားတွေးတယ် …. ။ (စစ်သာ စစ်တာ ဟန်ပြပါ .. အိတ်ထဲ လျှောက်လှန်လှောရှာပြီး သူတို့ရောင်းကုန်နဲ့ တူတာဆိုလျှင် စတစ်ကာတွေ လျှောက်ကပ်တော့တာပဲ … ကျွန်မနဲ့ ခဏခဏ ပြသနာတက်တယ် …. စတစ်ကာတွေက ခွာပြီးတောင် ကော်တွေ ကျန်နေတတ်တာကြောင့် … ကော်တွေစင်အောင် ပြန်လုပ်ရတာအလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့ပါ ) ။ ၀ယ်လျှင်ကောင်းမလား ၊ မကောင်းဘူးလား အတွေးနဲ့ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတုန်း … မြွေရောင်းတဲ့ ဦးလေးကြီးက ကိုင်ကြည့်မလားဆိုတာနဲ့ … အိစိအိစိမြွေတစ်ကောင်လောက် အရဲစွန့်ပြီး ကိုင်ကြည့်လိုက်တယ် … ။ တခြားမြွေတွေနဲ့ မတူတာက သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာက စိုစိစိဖြစ်မနေပဲ … ခြောက်နေလို့ပါ… ကျွန်မလက်ထဲ ကိုင်မိတဲ့အခါ … လူကိုပတ်မှာ စိုးလို့ကြောက်အား လန့်အား ညှစ်မိပါတယ် … မြွေရောင်းတဲ့ လူက လက်နဲ့ ညှစ်တာနဲ့ သူတို့ သေရရှာတယ်ပြောလို့… စိတ်မကောင်းပဲ ခပ်ဖွဖွလေး ကိုင်ထားမိပါတော့တယ် … ။ မြွေဝယ်လျှင် တကောင်တည်းဆို ပျင်းမှာစိုးလို့ နှစ်ကောင်လောက် ၀ယ်မယ်တွေးတော့ … မြွေရောင်းသူက အထီးအမ၀ယ်ပါတဲ့လေ … အစုံလိုက်ဆို ပွားမှာပေါ့လို့ ပြန်ပြောတော့… ဟုတ်ပါတယ်တဲ့… တစ်ခါပွားလျှင် နှစ်ကောင်ကနေ ကိုးကောင်အထိရှိပါသတဲ့ … ။ ဒါနဲ့ပဲ … မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး ကိုင်ထားတဲ့ မြွေ သူ့လက်ထဲ ပြန်ပေးပြီး … လှည့်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ် … ။
အရင်က ကြောင်လေးတွေ ၊ ခွေးလေးတွေ ၊ ကြက်တူရွေး ၊ သာလိကာ ၊ ယုန် ၊ ငါး မွေးထားဖူးပေမယ့်… သူတို့ သေသွားလျှင် ကျွန်မပါ မအိပ်နိုင် မစားနိုင်ဖြစ်ရတယ် …. ။ ကြောင်တွေဆို သူများကိုလည်း မပေးရက် … အိမ်မှာကလည်း များလာလွန်းလို့ .. အဆူခံရနဲ့ … ကြောင် ဆယ့်နှစ်ကောင်ထိ အများဆုံးမွေးခဲ့ဖူးတယ် … ။ သတ္တ၀ါတစ်ကောင်ကောင်ကို မွေးပြီးပြီဆိုလျှင် သံယောဇဉ်ဖြစ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတာကြောင့် ….ကျွန်မ မွေးထားတာလေးတွေ သေပြီး … ဘယ်သတ္တ၀ါမှ မမွေးဘူးလို့ တွေးနေခဲ့တာ … လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကတည်း က ဘေးအိမ်ကကြောင်လေး … အိမ်ရောက်လာတော့ … အခု အိမ်မှာ သောင်တင်နေလေပြီပေါ့ … ။ အတူစား ၊ အတူအိပ်ပြီး ပွတ်သီး ပွတ်သပ်နေလေတော့ကြောင်လေးက ငယ်မွေးခြံပေါက်လို ကျွန်ကို သူ့သခင်မှတ်နေတယ် … ဟိုးတခါ သူ့အကြောင်းပို့ စ်တင်ဖူးပါတယ် ရေခဲချောင်းစားတဲ့ ကြောင်လေး မည်းမည်းဆိုတာပေါ့ … ။
ဆိုလိုချင်တာက … ဘယ်သတ္တ၀ါမဆို ကိုယ့်အပမ်းဖြေဖို့ သက်သက် သူတို့ လွတ်လပ်မှုကို မချုပ်တည်းသင့်တာပါပဲ … ။ အခုမြွေလေးတွေလည်း .. အဆိပ်မရှိ ၊ မကိုက်နိုင်တော့ … လူတွေရဲ့ အလှမွေးဖြစ်ကြရရှာတယ် … ။ သနားစရာ သူတို့ ဘ၀ ပုလင်းထဲ ခွေခေါက် နေရပုံကို စာနာမိလို့ … ၀ယ်ပြီး အိမ်မှာ လွှတ်ထားဖို့ကလည်း … မြွေက သေးလွန်းတာကြောင့် အိပ်နေတုန်း ပါးစပ်ထဲ နားထဲ ၀င်သွားမှာက တကြောင်း ၊ ကြောင်နဲ့ မြွေ ဖိုက်တင်ပလေးနိုင်တာက တကြောင်းနဲ့ …. ကိုင်ကြည့်ပြီးမ၀ယ်ပဲ… အိမ် ပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ် … ။ ။
တုံးရေ အဲဒီ မြွေလေး မွေးဖို့ အိမ်ခေါ်သွားရင် အိမ်က ကြောင်တွေ လက်စွမ်းပြလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
အိမ်မှာ မွေးတုန်းကတော့ သူတို့တွေက
ပထမ တစ်ကောင်တုန်းက (7)လလောက်ခံပင်မယ့်
နောက်တစ်ကောင်ကတော့ (3) လပဲကြာတယ်လေ
နောက်ပိုင်းတော့ မမွေးဖြစ်တော့ပါဘူး အိမ်ကဆူလွန်းလို့လေ
နွယ်ပင်ရေ… အိမ်မှာ ဘယ်လိုထားလဲဟင် … လွှတ်ထားပေးလျှင်တော့ လျှောက်ပြေးနေမှာ အသေချာပဲ … ခေါင်းလေးတွေက သေးသေးလေးနဲ့ … လှစ်နေတာပဲ သွားတာများ … ။ အကောင်သာသေးတာ မာန်ဖီတတ်တယ် … ပါးပြင်းထောင်တယ် … သို့ပေမယ့် … ကြောက်စရာမကောင်းဘူး ..ဟီးဟီး … ပုံတွေထဲမှာတောင် ပါးပြင်းထောင်တာ တစ်ပုံပါတယ်လေ …
အိမ်မှာကတော့ ပချုပ်လို ကြိမ်တောင်းလေးရှိတော့ အဲထဲမှာပဲ ထားတယ်လေ
သူတို့ကို အစာကျွေးခါနီးမှ ပချုပ်လေးထဲက ထုတ်ပြီးကျွေးတယ်
တစ်ခါတစ်လေတော့ ဒီအတိုင်းခုံလေးပေါ်မှာပဲထားတယ် လျှောက်တော့မပြေးဘူးပဲ
သွားလဲ ဝေးဝေးလံလံမဟုတ်တော့ ပြန်တွေ့တာများပါတယ် ။
ပါးပြင်းထောင်ယုံမဟုတ်ဘူး တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဆိုးရင် ပေါက်တောင်ပေါက်တယ်
နာတော့ မနာဘူးပဲ ဒါပေမယ့် လန်တော့သွားသေးတယ်
မြွေဆိုတော့ မြွေဇာတိလေးတော့ ပြမှာပေါ့လေ … ဟီးဟီး
ကြံကြံဖန်ဖန် ဘယ်လိုမြွေအမျိုးအစားကို ပွားပြီးရောင်းကြသလဲ မသိဘူး..
အဆိပ်မပါ..မကိုက်တတ်လို့ မြွေသူတော်လို့ ခေါ်တာဖစ်မယ်နော့
အော် မအိတုံ မြွေမ၀ယ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းပြချက်ကလဲ တယ်ကောင်းသကို… မြွေတော့မကြောက်ဘူး.. ဟိဟိ
မြွေမ၀ယ်ပါဘူး ရွှေတိုက်စိုးရေ … မြင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလို့ဝယ်မလားတွေးမိတာ … နောက်မှ အဆင်မပြေမှာ တွေးမိပြီး … စိတ်အလိုမလိုက်ပဲ ကိုင်ကြည့်ယုံကိုင်ခဲ့တာ … ။
ဒါပေမယ့် မြွေကအီးအီးပါရင် ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး (ညစ်ပတ်မလားမသိ)
Shin Gwan Gwi says:
Pan Pan ရယ်…ကြောင်ချေးပါတာ ပိုဆိုးတာပေါ့…အိပ်ရာပေါ်လဲမရှောင်…ခြင်ထောင်လဲရှူးနဲ့ပန်း….အပျင်းကလဲထူသေး…ကြွက်ခုတ်ပီးရင်လဲ ဟိုချောင်ကြား..ဒီချောင်ကြားထားလိုထား…အနံ့ထွက်မှ လိုက်ရှာပီးလွှတ်ပစ်ရတာက တစ်မျိုး…ညနက်သန်းခေါင် ကြောင်အချင်းချင်း မာန်ဖီသံကလဲ မသက်သာလှဘူး..ဟီးး..ပြောချင်တာက မြွေလဲမမွေးရဲဘူး ကြောက်တယ်..
မိုးပွင်တောဘယ် သတ္တ၀ါမှချစ်တတ်ဘူး …
မြွေဆိုရင်ဘယ်လောက် သေးသေး အဆိပ်ရှိရှိမရှိရှိကြောက်တာပဲ
တီကောင်တို့ ငရှဉ့်တို့ကအစ ကြောက်တယ်
ကိုင်ဖူးတယ် ရှိအောင် စိတ်ကိုတင်းပြီး ကိုင်ကြည့်တာ… ။ တစ်ယောက်တည်းမို့ ကိုင်တာလည်းပါတယ် .. ဘေးမှာ တယောက်ယောက်ပါနေလျှင် အရိုးများတယ် ချေးခါးတယ် လုပ်နေဦးမယ် … တယောက်တည်းသွားတော့ အဟီး .. အရဲစွန့်ကြည့်တာ ..
“”””ကဗျာကယာ ဘေးကလူကို လှမ်းဆွဲပြီး ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ဆောရီးပြောရပါတော့တယ် …. ။””””
အမယ် ဆွဲမိတဲ့ သူက ချောချော၊သဘောကောင်းကောင်းလေး ဖြစ်။
နောက်တော့ ဖုန်းနံပတ်တွေဘာတွေ ဖလှယ်ကြ၊ နောက်တော့ လက်ရှိ ဒေါက်တာနဲ့ ရှင်းရ။
ရိုးရိုးသားသားခင်တာပါ ၊ ဘာညာသာရကာ၊ နေကြာကွာစိ လုပ်။
ဒေါက်တာကနောက်ပိုင်းသိပ်မကြာခင်စိတ်မချလို့ မြန်မြန် ယူလိုက်ကြ။
ဒီမြွေတွေက မွေးလဲ သိပ်အသက်မရှည်တတ်ကြဘူး။
ကျွန်တော့ဇနီးရဲ့ သူငယ်ချင်း ၀ယ်ဝယ်မွေးတာ ရက်ပိုင်းလောက်ခံတာများတာပဲ။
PanPan မွေးတော့ ဒီလောက်ခံတာ တော်တော်ကြာတယ်တောင်ပြောရမယ်။
တကယ်တော့ ဒီမြွေရောင်းသူတွေလက်ထဲ ရောက်နေမှဖြင့် ကိုယ်ဝယ်မမွေးလဲ သူများဝယ်မှာ သို့မဟုတ် ဒီအတိုင်းသေမှာပေါ့နော်။
အဲဒီလိုတွေးမိလို့ မြွေနဲ့လဲဆော့ချင်တာနဲ့ ၀ယ်မလို့လုပ်ဘူးတယ်။ အရေးပိုင်က လက်မခံလို့။:(
ကျုပ်တို့ လူငယ်တွေ ဘီယာသောက်ပြီးရင်
“မူးရင်အေးဆေးနေ..မြွေမဖမ်းနဲ့ ” တဲ့
အတုန် က တော့ မြွေမဖမ်းရဘဲနဲ့ ၊ ဒီအတိုင်းတောင် ကိုင်ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့
ကျုပ်ဖြင့် မရဲပေါင်ဗျာ ။
တော်ပါပြီ တုန်တုန်ရယ် မြွေသူတော်ရော မသူတော်ရော မမွေးရဲဘူး…
မြင်တာနဲ့ တင် အသဲယားတယ် ….ကြက်သီးထတယ်….
တံစို့ ကလေး ထိုးပြီး ကင်ကော မစားချင်ဘူးယား
ကောင်းတာပါ့ မောင်ပေရယ်…။ နင်အမြည်းမရှိရင် အိုကေပဲ…။ နှာတို က ပူတယ်… ။ ရေနိုင်နိုင်ချိုးမှ နို့မို့ဆို အပူတွေ ကန်တယ်..။ မြွေပွေးသားကိုပြောတာ………………
အောင်မလေး etone ရယ် ပျော့စိစိနဲ့ အသဲယားစရာကြီးကို ကိုင်တောင်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်တဲ့ … မတော်လို့ အသဲယားပြီး ညှစ်လိုက်မိလို့ သေသွားရင် အလျော်က ပေးရအုံးမယ် …
အဖြစ်သည်းနေလိုက်ကြတာ…. ရွာထဲမှာလည်း ကြောင်သူတော်ကြီး ရှိပါတယ်။ ဖိတ်ဖိတ်ချင်း ကိုယ့်အိတ်ထဲ ဖိတ်မှပေါ့..
မြွေသူတော်က နို့ပဲသောက်တာ … ကိုကြောင်ကြီးလဲ ကြောင်သူတော်ဖြစ်ချင်လျှင် …ငါးကြော်မစားနဲ့ .. ရေသောက်
စကားပုံတခုကြားဖူးပါတယ် ဘာတဲ့ … ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးဆိုလား ဟိဟိ
မြွေဆို အဆိပ်ရှိရှိ မရှိရှိ…
တို့ ကြောင်းမင်းကို ငါးကြော်နဲ့ မျှားပြီး
ပြောမယ်သာ ပြောသာ ကိုယ်လည်း ကြောင်မျိုးရိုးက
အော် အော် ကြံကြံဖန်ဖန် စီးပွားရှာတတ်ကြတယ်နော်…. မြွေသူတော်တဲ့… မတော်လို့ကိုက်လိုက်ရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ….